चुनौतिहरुको सामना गर्न सवै एक जुट हुनुपर्छ । माहासचीव सरोज पोखे्रल | Janaakash
Home / अन्तर्वार्ता / चुनौतिहरुको सामना गर्न सवै एक जुट हुनुपर्छ । माहासचीव सरोज पोखे्रल
Janaakash Media १४ असार २०७६, शनिबार ११:५८	अन्तर्वार्ता Leaveacomment 86 Views
मनिसहरुले व्यवसाय जुनसुकै गरेको किन नहोस् । सफलता प्रप्त गर्नको लागि लगनशील, मेहेनत, र इमानदारिता चाहिन्छ ।
त्यस्तै व्यवसायमा इमानदार छु भनि दावी गर्नुहुने र बैदेशिक रोजगारीमा कामदार नि¥यात गरिरहनु भएका बैदेशिक रोजगारमा सफल व्यवसायीको रुपमा परिचित सरोज प्रसाद पोखेल उदारण बन्नु भएको छ । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २७ औ साधारणसभा र १५ औ कार्य समितिको निर्वाचनमा सवै बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पोखेललाइ आशा र भरोसा लाग्दो व्याक्तित्व भनेर अथ्र्याउन थालिसकेका छन ।
तर पोखेल भन्छन् सस्थाले, हामीले आस्था राख्ने संगठन साथै साथिभाइहरुले जे निर्णय गर्छन त्यसमा म सहमत हुनुपर्छ साथीभाइको र संस्थाको निर्णय नै आफ्नो प्रतिष्ठा ठान्ने पोखे्रल सम्भवत १५ औ निर्वाचनमा नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुने सम्भावना बढी भएको देखिन्छ ।
नेपाल बैदहिक रोजगार व्यवसायी संघको माहासचीवको हैसियतमा तपाइ रहनु भएको छ ।
पछिल्लो प्रगति कस्तो छ ?
सर्व प्रथमत हाम्रो कार्य समितिले उपलब्दी मुलक कामहरु गरेको छ । अर्को केहि दिन अगाडी मात्र मैले माहासचीवको हैसियतमा जिम्मेवारी सगालेको हो ।अहिले हाम्रा व्यवसायीका केही समस्याहरु रहेका छन् । ति समस्याका विरुद्धमा हामी केन्द्रीत भइरहेका छौ । यो विषयमा सरकारसँग छलफलमा छौ । अव्जेक्शन लेटरको समस्या छ । त्यसै गरी धरौटी बृद्धी भएको छ । मलेसियाको रोजगारी १४ महिना देखि बन्द छ । भरखरै मर्जरको विषय पनि आएको छ । यि आएका विषयहरुलाइ सावधान गरी व्यवसायीहरुलाइ अधिकतम् राहात दिने योजनाका साथ हाम्रो कार्य समिति अगाडी बढीरहेको छ ।
विषेश गरेर बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका लागि यो कार्यकाल त्यति सुखद रहेन भन्छन व्यवसायीहरु त्यसमा पनि अहिले सरकार पक्षधर कार्य समिति छ । यसमा तपाइको बुझाइ के छ । ?
यो कार्यकाल मात्र चुनैतिपुर्ण रहेको होइन । हाम्रा कार्य समितिका कार्यकालहरु सवै चुनैतिपुर्ण रहेका थिए । बरु ति चुनैतिलाइ हाम्रो कार्य समितिले केहि हदसम्म भए पनि समस्याको सावधान खोजेर व्यवसायीको धेरै कामहरु गरेका छौ । विगतमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा १० हजार भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसमा व्यवसायीले सेवा सुविधा लिन पाउने गरी हामीले सरकारसँग समन्व गरेका छौ सम्भवत त्यसको रिजल्ट चाडै आउछ ।
तपाइले प्र¥श भैइरहेको बताउनु भयो समस्याको सावधानहरु निर्वाचन पछि आउछन् की त्यो भन्दा अगाडी आउछन् ।?
हामी निरन्तर अभियानमा छौ केही केही समस्याहरु सावधान गरिसकेका छाँै । निरन्तर हामी लागि रहेका छौ । निर्वाचनलाइ मात्र केन्द्रीत गरेर योजना सारेको होइन विगत देखि कै निरन्तरता हो । यद्दपि हाम्रो निर्वाचनका लागि पनि केही चुनौति हामी माझमा छन् । यसलाइ हामी विधान सम्मत ढंङगले टुङगोमा पु¥याइ निर्वाचन सम्पन्न र्गछौ ।
तपाइ नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विभिन्न भुमिकामा रही सक्नु भएको छ । आउदै गरेको निर्वाचनमा कुनै महत्वपुर्ण दावेदारीको लागि सोच बनाउनु भएको छ की ?
मेरो पोजिशन के हुने, कुन उमेद्धार हुन, के पदमा उठने, उम्मेद्धारी दिने नदिने विषय भन्दा पनि यो क्षेत्रलाइ व्यवस्थित, म¥यादित,सुरक्षित बनाउने हाम्रो जुन अभियान छ । त्यो अभियानलाइ हामीले लिएर अगाडी बढीरहेका छौ । यो सन्दर्भमा आम व्यवसायीका समस्याहरु सँग जुदेर अगाडी बढीरहेका छौ । यि तमाम व्यवसायीहरुका समस्यासँग जुदन , एउटा टुङगोमा पु¥याउन, व्यवसायीलाइ राहात भएको महसुस गराउने गरी हामी २७ औ साधरणसभा र निर्वाचन गराउन गइरहेका छौ । जुन तपाइले मेरो उम्मेद्धारी को जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउनु भयो यदि म आवद्धा संस्थाले आवाश्यकता ठान्यो, साथीहरुको आग्रह आयो भने म जस्तोसुकै जिम्मेवारी लिन तयार छु ।
तपाइले गनैपर्ने काम के देख्नु भएको छ बैदेशिक रोजगार संघमा ?
पहिलो कुरा बैदेशिक रोजगार २०६४ एन व्यवसायी मैत्री छैन त्यो एनलाइ संशोधन गरी आम व्यवसायी कामदार मैत्री बनाउन जरुरी छ । दोस्रो कुरा त्यस एनसँग जोडिएका विभिन्न कुराहरु छन् साथै मलेसिया रोजगारको समस्या व्यवसायीहरुको लागि पीडा छ ।अर्को सरकारले मर्जरको नीति ल्याएको छ । केही समस्यका कुरालाइ सावधान र भए गरेका राम्रा पक्षलाइ सक्षण गदै जानुपर्ने साथै समग्रमा सवै व्यवसायी नेपाल बैदेशिक रोजगार संघमा अटोस अटाउ भन्ने धेय त्याहा छ । दुतावासको प्रमाणीकरण ठुलो समस्या हामीले भोगिरहेका छौ ।सर्भिस चार्ज कम्तिमा इन्टरनेशनल स्टान्डर्डको एक महिना बराबरको सर्भिस चार्ज लिन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारसँग माग छ । हामी मात्र नि¥यात कन्ट्री होइनौ हामी जस्तै भारत, बगलादेश, श्रीलङका जस्तै गरी प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्छ जवसम्म ति अन्तराष्ट्रिय प्रक्टिशलाइ सम्वोधन गरेर हमी जान सक्दैनौ तवसम्म यो व्यवसायलाइ व्यवस्थित गर्न सक्दैनौ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
मलेसियामा रोजगारी अन्य देशभन्दा बढी छ ।तर पारिश्रमिक कम छ । मलेसिया भन्दा अन्य मुलुक सँग कामदार पठाउने विषयमा तपाइहरुले केही सोच्नु भएको छ । ?
हाम्रो व्यवसयीहरुको क्षत्रवाट नयाँ नयाँ गन्तव्यको काम ल्याइ राखेका छौ तपाइलाइ भनौ इरोपियन कन्ट्रीका कयौ देशहरु जस्तै माल्टा देखि पोल्याण्डका एसिया कै कुरा गर्नु हुन्छ भने पनि सिंगापुर, जापान लगायत मुलुकहरु हरुवाट मागहरु ल्याएर हाम्रा साथिहरुले युवाहरुलाइ रोजगार पस्किरहेको अवस्था हो । यद्दपि मलेसिया हाम्रो लागि प्रमुख गन्तव्य थियो र चासो दिएका छौ । एकलाख भन्दा बढी कामदारहरु महिनामा जाने र धेरै कामदार साथीहरु मलेसिया सँगै जोडिएको भको कारणले गर्दा १४ महिना देखि यो अवरुद्ध हुदा व्यवसायीलाइ ठुलो पिरमर्का परेको, कामदारलाइ जान नपाउने अवस्था यि समस्याले हामीलाइ गम्भिर बनाएको छ । यसको अलवा हामीले राम्रा कन्ट्रीहरुको डिमाण्डहरु हाम्रा साथीहरुले ल्याइराख्नु भएको छ । थप ल्याउने प्र¥याश भैइरहेको छ । हामी लागिराखेका छौ । मलेसिया रोजगारी वास्तवमा भन्ने हो भने मलेसिया रोजगारीमा जुन खालको सेन्डिकेट रहेको ।थियो त्यसले व्यवसायीहरुलाइ ठुलो मर्का पा¥यो कामदारलाइ त्यसतै लेवीका समस्याहरु लादिएका थिए हामीलाइ ठुलो आर्थिक व्यायभार भयो भनेर ति सेन्डिकेटहरु खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । मान्य मन्त्री ज्यूले ति सेन्डिकेट विरुद्ध कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुभयोे त्यो अवरुद्ध मलेसिया रोजगार सही ट्रयाकमा लिएर खोल्ने जिम्मेवारी दाइत्व हामीमा छ । हामीले त्यो काम पुरा गर्नुपर्छ । यद्दपि अन्य मुलुकहरुमा पनि हाम्रा युवाहरुलाइ एस्पोलर गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौ ।
हामी बैदेशिक रोजगारको कुरा गदैछौ । तपाइ दुइदशकको अनुभवि हुनुहुन्छ बिदेश गएर कतिले पैशा कमाएर लिएर पनि आए सिजन परेको वेला व्यवसायीले पनि राम्रै पैशा कमाए । तर आफ्नै देशभित्र रोजगार सृर्जना गर्ने सोचको छलफल तपाइहरु बीचमा हुने गर्छकी गदैना ?
हामी यसमा प्रष्ट छौ हाम्रो देशभित्रै रोजगार सृर्जना हुन्छ हाम्रा दिदीबहिनीहरुले बिदेश जानै नपर्ने वातावरण सृर्जना गरी रोजगार प्रप्त गर्छन भने हामी त्यसमा खुसी हुन्छौ । हाम्रो पेशालाइ डाइभर्ट गर्न सक्छौ । हामी भनेको रिक्रयूमेन्ट एजेन्सीहरु हौ । अहिले नेपाली कामदारहरुलाइ बाहिर पठाइरहेका छौ । भोलि नेपालमै आवाश्कता बढेर बिदेशी कामदार नेपाल ल्याउन प¥यो भने नेपालमा कामदार ल्याएँर आपुर्ति गर्न सक्छौ । जव सम्म नेपालमा रोजगारको सृर्जना हुदैन तवसम्म यसलाइ व्यवस्थित गरेर जान दिउ सुरक्षित भएर जाने र फर्केर आउने बातावरण बनोस त्यसको निम्ति नेपाल सरकारले ऐन बनाएर लाइसन्स दिएको छ । त्यो परिधि भित्र रहेर हामीले काम गरिरहेका छौ । अहिले बगलादेशीहरु नेपालमा आएर काम गरिरहेकाछन् । इन्डियनहरु आएर काम गरिरहेका छन् । हामी यस बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लागेका ब्यवसायीहरुले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेर देशमै पनि केही मात्रमा रोजगार सृर्जना गरेका छाँै भने हामीले पठाएका कामदारहरुले विदेशमा सिकेको सिप नेपालमा फर्कि याही स्वरोजगार बनिरहेका छन् । यसलाइ अझै व्यवस्थित गर्न प्र¥याश गरेका छौ ।
नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २७ औ साधरण सभाको तयारी कस्तो हुदै छ ?
साधरण सभा वर्षमा गनैपर्ने प्रक्रिया हो । त्यो हुन्छ । अर्को नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनलाइ सभ्य शान्त भयरहित वातवरणमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरीराखेका छौ । तर कार्य समितिको निर्वाचन गारो छ । त्यो किनभने हाम्रो संस्थामा एक हजार भन्दा बढी सदस्य संख्या छ । तर यो अन्र्तवार्ता दिदासम्म सदस्य संख्याको रिनु गर्ने संख्या डेड सय पनि पुगेको छैन । यसको अर्थ कुल संख्याको १५ प्रतिसत पनि पुगेको छैन । यो अवस्थामा कसरी कार्य समितिको निर्वाचन होला त्यही भएर हामीले निर्वांचनलाइ अलि पर सारेर भए पनि सहज र सौहार्दा वातावरणमा सम्पन्न गराउन गइरहेका छौ ।
अन्तमा केही छुटेका छन भने ?
व्यवसायीहरु अत्यन्तै जटिल र कठिन मोडवाट गुज्रीरहेको अवस्था छ । यो समयमा हामीले हिक्मत हार्नु हुदैन । व्यवसायलाइ जोगाउने विषयमा सवै लागौ संघको तफैवाट साथै मेरो व्यातिगत तर्फवाट पनि म तयार छु । नअतालिकन चुनौतिहरु विरुद्ध जुद्धने अभियानमा याहाहरुको सवैको साथ सहयोग रहोस म यही आग्रह गर्न चाहान्छु ।